トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Twin Seoul sehatra fahatelo sehatra ho toy ny "krizy" dia
Mpilaza tena ho [3500 Yen Free fanombanana] mba fomba
Seoul kambana fivoriana, ny fanahy dia hanitsaka ny dingana fito toy ny fanitsiana farany ho tonga iray. Izany mitendry ny nanafintohina fihaonana teo amin'ny dingana voalohany, fa hiaina ny fifohazam-panahy, ka tonga ny dingana faharoa tratra tao amin'ny traikefa sy ny fahalalana azo tamin'ny andro-to-andro izay efa lany samy izy, ny mpanohitra ny hambom-pon'ny azo avy imprinting Mino aho fa na ny tebiteby na ny fisalasalana.
ary ny dingana manaraka dia ny dingana fahatelo. Dia sehatra, dia nariany ny hambom-pon'ny izay novolavolaina ho amin'ny ankehitriny, na dia afaka manao zavatra ianao mba hamela ny fanahy mahasarika ny tsirairay no fanalahidy. Na izany aza, ho an'ireo izay efa mangidy noho ny fitiavana lasa traikefa, mba handao ny hambom-pon'ny nambolena avy ny zava-nitranga mampatahotra dia izany indrindra, dia ho mafy kokoa aza.
Noho izany, dia ho hanisy ratsy mba tsy ho tanteraka ny hambom-pon'ny nariana amin'izy samy izy. Izany ihany koa dia fitsapana izay efa napetraka mba ho iray fanahy sy ara-panahy tanteraka Mifohaza, tena kambana Seoul dia tsy maintsy mandresy io fahoriana mafy dia tsy afaka ho iray.
amin'ny dingana io dia niaraka tamin'ny be fanaintainana, fa ahoana no handeha na niady ny hambom-pon'ny teboka. Tratra tao amin'ny foto-kevitra ny fitiavana
fepetra, ao amin'ny
fahatelo dingana ny fifandonan'ny planeta dia hampijalina fitiavana
? lasa fepetra izay mitranga amin'ny kambana fanahy, ny lasa tia traikefa ny, izay efa za-draharaha ao amin'ny dingana faharoa fanahiana ary, rehefa avy nijaly tany fisalasalana ho an'ny antoko hafa, dia hand? ny antoko hafa dia tsy afaka hanohitra ny fijaliana. Hatreto ny fitiavana dia tsy ny fitiavana avy amin'ny fanahy kambana, dia ireo avy amin'ny toe-javatra sasany-napetraky ny tsirairay, fa hitondra any izay mand? ny antoko hafa amin'ny alalan'ny tsy hanamarina ny toe-javatra.
Na izany aza, raha tokony ho ny fitiavana fepetra teo aloha ao amin'ny dingana fahatelo, dia dingana filazana ho tia ny mpiara-miasa tsy misy fepetra. Noho izany, niaina ny fomba tany aloha, ny foto-kevitra momba ny fitiavana ny fepetra fanary Na Terra zava-dehibe.
hevitra nitranga in
lasa tia traikefa
? fanahiana sy ny tratra koa ny ahiahy ao collide amin'ny antoko hafa, tsy ho mora nariana. Tebiteby sy ahiahy avy amin'ny foto-kevitra io, ao amin'ny dingana fahatelo dia ho goavana kokoa sy lehibe kokoa. Avy eo, tsy foana ny fahamarinan-toerana ny fihetseham-po, dia ho koa ny mpiara-miasa sy imbetsaka collide.
na dia eo aza Dia toy izany ny toe-maharary, mbola mahasarika ny olona roa samy hafa, dia mbola mafy tryst. Amin'ny teny hafa, mba hihaona rehefa mihazona fijaliana lehibe avy amin'ny tebiteby sy ny ahiahy, tsy afa-mandositra ny fijaliana.
kambana fanahy amin'ny alalan'ny dingana ity ao amin'ny
dingana fahatelo ny fisarahan'ny ny sehatra, dia nanery ny fahoriana lehibe. Raha tsy manjaka ny hambom-pon'ny ny mandraka ankehitriny, dia mandroso ihany koa eo amin'ny ady amin'ny kambana fanahy ny ady lehibe. Ny dingana manaraka izany, fisarahana ny sehatra dia niandry.
Na dia izany aza, mifanohitra izy samy hanatsara aorian'ny fisarahana, raha fantatrao ny zava-misy fa misy ihany koa ny tsy maintsy mba manary ny hambom-pon'ny, dia afaka nanatrika ny faran 'ny sehatra. Ahoana no mety hanohitra izany fotoana izany ho zava-dehibe.
Ao amin'ny tany, dia ho napetraky ny fahoriana lehibe. Raha tsy manjaka ny hambom-pon'ny ny mandraka ankehitriny, dia mandroso ihany koa eo amin'ny ady amin'ny kambana fanahy ny ady lehibe. Ny dingana manaraka izany, fisarahana ny sehatra dia niandry.